Vaovao - Rehefa mampiasa ny milina fikororohana hamokarana, ny fizotran'ny fikorisana dia tsy maintsy tandremana ary tsy tokony hohamaivanina.
Rehefa mampiasa ny milina fikorisa amin'ny famokarana, ny fizotran'ny fikorisana dia tsy maintsy tandremana ary tsy tokony hohamaivanina.
Rehefa mampiasa ny milina fikorisa amin'ny famokarana, ny fizotran'ny fikorisana dia tsy maintsy tandremana ary tsy tokony hohamaivanina. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia hanambatra ny horonantsary mitambatra BOPP / LDPE mitambatra, ireo olana ara-kalitao izay mitranga amin'ny fizotry ny famokarana sy ireo olana mifandraika amin'ilay milina fanesorana mba hamakafaka.
1. Fehezo ny hafainganam-pandeha
Rehefa miditra amin'ny famokarana ara-dalàna, ny hafainganam-pandehan'ny milina fikorisana dia tokony hanaraka tsara ny fepetra takiana. Ny avo loatra koa dia hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fanapahana. Noho izany, amin'ny fifehezana ny hafainganam-pandehan'ny fikorisana, ny kalitao takiana amin'ny fikorisana dia azo atao. Satria, amin'ny famokarana, ampiasain'ny mpandraharaha sasany ny hafainganam-pandeha hampihenana ny hafainganam-pandehany mba hampitomboana ny vokatra ary hanatsarana ny tombony ara-toekarena. Izany dia hahatonga ny sarimihetsika ho mora tohina lava sy olana amin'ny kalitaon'ny fisarahana eo ambanin'ny fandidiana haingam-pandeha.
2. Safidio ny fizotran'ny fikorisana mifanaraka amin'ny fitaovana sy ny fampisehoana an-tsarimihetsika
Amin'ny famokarana ara-dalàna dia ilaina ny mampiasa teknolojia fitorahana sahaza ho an'ny famokarana arakaraka ny fahombiazan'ny fitaovana, ny toetra mampiavaka ny sarimihetsika, ary ireo karazany sy fanavakavahana ny sarimihetsika. Satria samy hafa ny masontsivana sy ny fomba famaritana ary ny sanda amin'ny sarimihetsika isan-karazany, dia tsy maintsy ahitsy tsara ho an'ny vokatra tsirairay ny fizotrany.
3. Tandremo ny safidy tsara amin'ny toeram-piasana
Amin'ny famokarana, ny fahamaroan'ny fampiasana ny toerana tsirairay an'ny slitter dia samy hafa, noho izany ny fahasamihafana amin'ny fitafiana dia tsy mitovy ihany koa. Noho izany, hisy fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana. Ohatra, misy vitsy kokoa ny tsipika mitsangana amin'ny fametahana vokatra amin'ny toe-javatra tsara kokoa. Mifanohitra amin'izay no misy, misy dian-kapoka lava kokoa. Noho izany, ny mpandraharaha tsirairay avy dia tsy maintsy mitandrina ny safidy tsara amin'ny toeram-piasana, manome ny lalao feno ny faran'ny fitaovana tsara indrindra, mahatakatra ny fampiasana eo an-toerana, mamintina ny traikefa ary mahita ny fampiasana ny toetra tsara indrindra amin'ny fitaovana.
4. Ataovy azo antoka ny fahadiovan'ny sarimihetsika
Ho fanampin'izany, dia tokony homarihina fa mandritra ny fizotran'ny fikorisana dia sokafana indray ny horonan-tsarimihetsika tsirairay avy eo averina miverina, izay miteraka fepetra amin'ny fidirana zavatra vahiny. Satria ny vokatra horonantsary mihitsy no tena ampiasaina amin'ny famonosana sakafo sy fanafody, noho izany, ny fepetra momba ny fahadiovana dia henjana tokoa, noho izany dia ilaina ny miantoka fa madio ny horonan-tsarimihetsika tsirairay.